Indawo yokuphola yale mihla - imbonakalo entle ye-fjord kunye neentaba - I-Airbnb
Indawo yokuphola yale mihla - imbonakalo entle ye-fjord kunye neentaba
Kåfjord Olderdalen, Troms, Norway
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguAnn Kristin
UAnn Kristin yi-Superhost
Ikhaya lale mihla nelitofotofo, elijongene neLyngen Alps entle. Eyona nto imnandi ngale ndawo ipholileyo kukubona indawo, phakathi kwendalo, efihlakeleyo kwaye yimizuzu eyi- kuphela ukusuka kwiindawo ezintle zokunyuka intaba, ukutyibilika ekhephini okusemagqabini. Indawo apho indlu ihlala khona, ihamba yonke indawo isiya elunxwemeni lwamatye. Ebusika, bukela izibane zasentla kwendlu. Ehlotyeni, hlala kwintente ubusuku bonke uze wonwabele ilanga lasezinzulwini zobusuku. Le ndlu yakhiwa ngo-2016, inezinto ezidingekayo, neebhedi ezitofotofo kakhulu.
Indlu yamaplanga ime kwindawo epholileyo ejonge i-fjord kunye neentaba ezinkulu zase-Lyngsalpene. Kukho izindlu ezimbalwa ezijikelezileyo, awukwazi ukubona okanye ukuva nabani na ongummelwane. Ungaphumla ngokupheleleyo uze umamele nje izandi zendalo uze ujonge indawo entle kunye nemozulu njengoko itshintsha. Sithanda ukucofa elwandle ngokukhawuleza ngaphambi kokuzonwabisa ngeglasi yewayini, sihleli ngasefestileni. Ebusika ungahlala phambi kwendawo yomlilo emva kosuku olude lokutyibiliza ekhephini.
Ezi zindlu zimbalwa ibe zikude, yiloo nto kanye eziphole kangaka ukuhlala apha. Iivenkile ezikufutshane zikude ngeekhilomitha eziyi-3, eyona ndawo ikufutshane yokuthenga ikude ngeekhilomitha eziyi-19.
Umbuki zindwendwe ngu- Ann Kristin
Ungasifowunela ngefowuni ngexesha lokuhlala kwakho. Omnye wabancedisi bethu ekwamkeleni iindwendwe ohlala kufutshane nawe kufuneka uncedwe ngqo. Kubalulekile kuthi ukuba ukonwabele ukuhlala kwakho. Siyakuvuyela ukucebisa ngohambo oluya kule ndawo okanye ngamanye amacebiso. Vele nje ubuze!
Ungasifowunela ngefowuni ngexesha lokuhlala kwakho. Omnye wabancedisi bethu ekwamkeleni iindwendwe ohlala kufutshane nawe kufuneka uncedwe ngqo. Kubalulekile kuthi ukuba ukonwabele…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Kåfjord Olderdalen